दार्शनिक फाँटमा दार्शनिक सिध्दान्त: आदर्शवाद र भौतिकवाद - Sisne Online
“दर्शनशास्त्रको सम्पूर्ण इतिहास दुई परस्पर विरोधी स्कुलहरु आदर्शवाद र भौतिकवादबीच संघर्ष र विकासको इतिहास हो। सबै दार्शनिक धाराहरु र स्कुलहरु यी दुई आधारभूत स्कुलका अभिव्यक्तिहरु हुन् ।” – माओ त्सेतुङ
दर्शन मानिसको भित्री आँखा हो , जुन आँखाले विश्वब्रह्माण्डलाई हेर्ने , बुझ्नेे र बदल्ने उसको दृष्टिकोणमा मद्दत गर्दछ । तसर्थ दर्शनले मानिसको विश्वदृष्टिकोण पैदा गर्दछ । त्यसैले दर्शन मानिसको आफ्नो विश्वदृष्टिकोण हो । विना दृष्टिकोण र विना विचारको मानिस नै हुदैन । त्यसैले एउटा सही भनाई छ , ” दृष्टिकोण नभएको मानिस जरा नभएको रुख ” जस्तै हो ।
तसर्थ दर्शन भनेको सैध्दान्तिक ज्ञानको त्यो रुप हो , जसले विश्वदृष्टिकोण सहित प्रकृति र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहित सम्बन्धित सामान्य सवालहरुको विश्लेषण र व्याख्या प्रस्तुत गर्दछ । साथै दर्शनले प्रकृति र समाजको विकास कुन ढंगबाट हुने गर्दछ , ऐतिहासिक विकासका मूल कारण र प्रेरक शक्तिहरु के हुन् , हाम्रो यश संसारलाई कुन रुपमा बुझ्न र फेर्न सकिन्छ – यी र यश प्रकारका सवालहरुबारे चर्चा गर्दछ ।
वास्तवमा विश्व यथार्थताको विशद व्याख्या प्रस्तुत गरि त्यसको वास्तविक सारलाई खुलस्त पार्ने कार्यभार दर्शनको हो । र , एक साँच्चिकै वैज्ञानिक दर्शनले सो काम गर्नु पर्छ र गर्न सक्छ । तर वर्गीय समाजमा दर्शन वर्ग दर्शन मात्र रहन्छ । जुन समाज वर्गहरुमा विभाजित रहेको हुन्छ , त्यसमा पाइने विभिन्न दार्शनिक सिध्दान्तहरुले विभिन्न वर्गहरुको हित र दृष्टिकोणको रुपमा दर्शनले सो वर्गको आधारभूत हितलाई सैध्दान्तिक न्यायोचितता प्रदान गर्दछ । र, सो हित अनुरुप विश्वकोो व्याख्या प्रस्तुत गर्दछ । साथै सो वर्षको स्वार्थ अनुकूल संसार फेर्ने प्रयासलाई निर्देशक सिध्दान्त प्रदान गर्दछ । यसमा नै दर्शनको मूल कार्यभार रहेको हुन्छ र सो काममा नै त्यसको सामाजिक भूमिका हरन्छ।
दर्शनको बारेमा चर्चा गरिरहदा एउटा के कुरा आवश्यक हुन्छ भने दर्शनको अध्ययन किन गर्नुपर्ने ? त्यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? अथवा दर्शनले हामीलाई कुन कुरा फाइदा गर्छ ? आदि कुरा गरिरहदा यश प्रकारका कुरा गर्नमा एउटा मुख्य कारण के हो भने दर्शन यस्तो चीज हो , जसले हामीलाई सैध्दान्तिक ढंगले कसरी सोच्ने ? सैध्दान्तिक धरातलमा उभिएर परिघटनाहरुलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने कुरा सिकाउछ । जस्तो कि कलाले हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरूको सृजना गर्ने क्षमता अर्थात् सिर्जना शक्ति प्रदान गर्छ र विचारमा खिया लाग्नबाट जोगाउँछ भने दर्शनले हामीलाई चीजहरुबारे बोध गर्ने शक र युक्तिसंगत ढंगले सोच्ने सामर्थ्य प्रदान गर्दछ ।
दार्शनिक प्रणालीभित्र केही यस्ता दार्शनिक चिन्तनहरु छन् जसले चिन्तन र सत्ता , आत्म र प्रकृति , चेतना र पदार्थलाई समानान्तर रुपमा प्राथमिक मान्ने , तिनमा समन्वय कायम गर्ने वा आफूलाई तटस्थ देखाउने गर्दछन् , तिनको दार्शनिक सिध्दान्तलाई द्वैतवाद , समन्वयवाद वा तटस्थवाद भनिन्छ । आकृति र पदार्थलाई समानान्तर ढंगले ग्रहण गर्ने अरस्तु , ईश्वर र प्रमाणु दुबैलाई प्राथमिक मानेर चल्ने न्याय – वैशेषिक , पुरुष र प्रकृतिको द्वैत अंगीकार गर्ने पछिल्लो कालको साङ्ख्य दर्शन , आफूलाई तटस्थ देखाउने गौतम बुध्द र तमाम प्रकारका प्रत्यक्षवाद , व्यवहारवाद आदि यश धारा भित्र पर्दछन् ।
यश विषयमा हामी यो निष्कर्षमा पुग्दछौ कि संसारलाई ज्ञेय र अज्ञेय मान्ने चिन्तन ज्ञानसिध्दान्तसंग सम्बन्धित रहेको छ । यश विषयमा हामी ज्ञानसिध्दान्तको मौलिक प्रश्नसंग सम्बन्धित रहेर चर्चा गर्न सक्छौ । के मानिसको मष्तिष्कमा वस्तुगत जगत प्रतिबिम्बित हुन सक्छ ? के मानिसको चेतनाले भौतिक संसारलाई प्रतिबिम्बन गर्ने सामर्थ्य राख्तछ ? के विश्व बोधगम्य छ ? के मानिसले संसारलाई बुझ्न र बदल्न सक्छ ? यी चिन्तन र सत्ताक‍ो एकरुपतासित सम्बन्धित प्रश्न हुन् । यो नै ज्ञानसिध्दान्तसंग सम्बन्धित दर्शनशास्त्रक‍ो मौलिक प्रश्न हो ।
दर्शनशास्त्रको फाँटमा जसले यी प्रश्नहरुको सकारात्मक जवाफ दिन्छन् ती भौतिकवादी हुन् । यसको उल्टो जसले यी प्रश्नहरुक‍ो नकारात्मक जवाफ दिन्छन् ती अज्ञेयवादको श्रेणीमा पर्दछन् । अज्ञेयवादले वस्तुको सारतत्वलाई बोधगम्य मान्दैन । यो धाराभित्र यो स्थितिमा अज्ञेयवादीहरुका लागि विश्वलाई बुझ्ने र बदल्ने कुरा सम्भव हुदैन । द्वन्द्वनत्मक भौतिकवादी मान्यता अनुसार संसार बोधगम्य छ । ठिक त्यसैले संसार र समाजका नियम पनि बोधगम्य छन् ।
(लेखक: अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)